Sida loo sameeyo Video Picture la Music
Iyadoo casriga ah oo casri ah oo weligiis isagoo kamarado badan oo casri ah oo qof ayaa qaadan sawirro iyo aad u badan, iyo caado ah in lagu diiwaangeliyo wax kasta oo aan samayn qaab sawir, ayaa soo isbedel ah u arkaysid sawirro qaab video, iyadoo music ku daray in ay bixiyaan audio a full / muuqaal ah waayo-aragnimo, halkii ay ka eegaya sawiro ma guurto ah oo fudud. Laakiin sidee baad u tegi ku saabsan samayn? Iyadoo software saxda ah waa mid aad u fudud runtii, iyo editor Wondershare Video ka dhigaysa in ay sida ugu fudud waxay noqon kartaa. Waxaan doonayaa inaan idin dhex socdo geeddi-socodka si ay u muujiyaan sida kaliya si deg deg ah waxaad u tagi kartaa sawirro aad galay waayo-aragnimo ah la daawado multimedia.
1. Ku rakib Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Sida software kasta, waxad bilaabaysaa waxaa ku rakibidda, halkan waxaad ka heli kartaa rakibayo ah, markaas kadibna hal mar rakibayo la soo bixi, dhigay rakibo socday. Haddii software brannmur aad weydiiyo ku saabsan rakibayo ha ku xidhin internet-ka si ay u soo bixi wax kasta oo updates iyo Muddo yar dabadeedna aad noqon doonaa shaashadda menu ee Video Editor.
2. dejinta sawiro aad
Si taas aad riix 'button Import dhammayn bidix ee sare, waxa aad soo bandhigaysaa, iyadoo labo doorasho, soo dejinta ama dejinta folder. Midkii kowaad wuxuu kuu oggolaanayaa in aad soo dhoofsadaan files hal ama dhowr ah, folder dambe oo dhan.
Marka aad samayn xulasho aad u hesho browser file hawlgalka caadiga ah, falgali in files ama folder aad rabto iyo waxa ay doortaan. Halkan waxaan samaynta Montage sawir sidaas darteed waxaan xushay sawirada qaar ka mid ah gaari u fiican, adigoo haysta hoos u wareejin waxaan iyaga oo dhan soo xulan kara mar, ka dibna waxay u soo dhoofiyo barnaamijka sida aan halkaan ku arko.
3. Jiid iyo dhibic sawiro waqtiga
Sida badan software video tafatirka, meesha ay diirada saaraya waqtiga at hoose, halkaas oo aad isku toosin aad footage, saamaynta iyo maqal ah. Waxaad doonaysaa in aad video in la sameeyo aad fuushay ka soo picturea, ao ay u baahan yihiin in ay qaybta video ah. Si fudud u qaado sawirka ugu horeeya oo jiidin deegaanka video ah, sida aan halkan ka arki kartaa.
Hadda, malaha halkan waxaad ka arki kartaa dhibaatada. Sawir Taasi soo qaadan oo aan boos badan. Balladhka sawirka waa ka wakiil ah markii ugu shaashadda, iyo sida aan ka arki kartaa by default tani tahay oo kaliya ku dhawaad ​​1 labaad. Tani waxay ku habboon laga yaabaa in qaar ka mid ah video Montage, laakiin halkan waxaan samaynayaa kaliya 4 images, sidaas darteed waxaan u baahan tahay in ay muddo dheer ka badan in.
4. Edit in waqtiga iyo Kulanka Xiisaha Leh ee screen
Nasiib wanaag ku filan Arrintaasna waa u Fududahay in Video Editor, doorataa image ee waqtiga aan u jiidi kartaa in muddada Waxaan doonayaa, halkan waxaan doonayaa inaan muddo 20 ilbiriqsi si ay u sameeyaan Montage fiican.
5. qalabka tafatirka More sida saamaynta, kala guurka, sawir sawirada
Editor Video kuu ogolaanaya in aad ku darto saamaynta fiican aad si fudud oo dhaqso marka aad dhaaftid. Waxaad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya sawiro aad, tani waa sida ay u bedelan. Taas waxa loo sameeyaa xulashada gudbayo menu shayga oo si fudud u soo jiiday mid ka mid meeshii laba sawirada kulmaan. Marka aad doorato kala guurka ah, aad ku eegaan karo screen video si aad u aragto waxa ay eegi doonaan sida.
Waxaan degeen on saamayn baxeysa sawirada aan ah oo ku daray on at isbedel kasta oo ka mid image. Waxaa si toos ah oo dhigaya waqtiga iyo si nafteeda ku, kaliya waxaa jiidin ku soo biiraan iyo in ay tahay.
Saamaynta kale oo aad ku dari kartaa saameynta PIP ah, doorataa tab PIP ee menu shayga aad ka arki kartaa noocyo kala duwan oo wax aad ku dari kartaa in aad video.
Tani waxay ka shaqeysaa in kala-guurka ee sidan oo kale samayn, in aad doorato mid ka mid ah oo hoos u jiidi in waqtiga. Walxaha PIP waxay leeyihiin qaybta u gaar ah, inkastoo, hoos ka qayb video ah.
Marka ay jiraan, in aad qabsato karaa inta ay yihiin shaashadda in waqtiga sida caadiga ah, iyo in ciyaaryahanka video aad qabsato karaa baaxadda iyo meelaynta sida aan ka arki kartaa in shaashada this.
Waxaan doortay in aan qabto wax walxaha PIP in aan video in dhamaadka, laakiin waxaa jira dhibaatooyin cayn kasta oo videos waxaa lagu daray dheeraad ah si ay u soo bixi Wondershare.
6. Ku dar music inay sawiro
Tallaabada xigta waa in ay dar music qaar ka mid ah. Haddii aad ku talo jirto iyadoo la isticmaalayo saamaynta dhawaaqa ka mid ah, waxaad u baahan doontaa in dib u dejinta button tagaan, oo dajiyaan music aad rabto in aad isticmaasho. Waxaa markaa soo bandhigay goobta warbaahinta.
Marka in warbaahinta aad kara, sida wax walba oo kale, waxaa jiidi hoos u gal waqtiga. Music wuxuu leeyahay meel gaar ah oo ku saabsan wakhtiga, si jiidi aad file ugu hooseysa.
Hadda, haddii aad ku tala gashay taas si aad u wanaagsan runtii, file music aad ma noqon doonto isla mudada aad video sida. Halkan aad u gaaban yahay. Tani maaha wax dhibaato ah si kastaba ha ahaatee, waxaad samayn kartaa wax kasta oo joogsi waqti isku mid ah. First qaado ku hanuunin dhamaadka aad ee tiirarkii si aad u leeyihiin calaamad cad oo ah meesha aad rabto in aad ka gooyay music ah.
Ka dibna dooro waxaad kala menu waqtiga, in yahay u-ekaanta 'maqas kaliya kor ku xusan jadwalka video ah. Hubi in track music aad muuqanayaan, gujinaya kala dillaaci doontaa track music laba dhab ahaan meesha hagaha loo maqli karo waa, sida aan halkan ka arki kartaa.
Hadda waxaan dooran kartaa wadada ka dib markii dhamaadka sawirada iyo kaliya tirtirto.
Haddaba, waxaan leenahay music iyo video u hagaagsan.
7. taabtana Final iyo dhoofinta
Ka dib markii aan wax walba dhigay, waxaad ka dhigi kara wax badan la qoray doorataa button edit la track music xulay iyo korinta menu edit music ah. k
Halkan ayaan ku daray baxeysa ka soo baxay in ka badan 3 ilbidhiqsi dhamaadka video ah, oo ka baxeysa gaaban si markaa aysan kaliya isla markiiba soo on.
Ugu dambeyntii, mar aad ku faraxsan tahay wax walba waa, haatan waa wakhtigii la dhoofin video ah.
Doorashada button dhoofinta aad qaadanayso in this menu meesha aad dooran kartaa qaabka aad dooneyso in video ee. Helpfully waxaa jira prests qalabka kala duwan sida iPhone, Playstations iyo wixii la mid ah, iyo sidoo kale wax soo saarka DVD oo dhan dhisay. Waxaad kartaa sidoo kale gacanta doortaan qaab iyo meesha aad rabto in aad file laga dhoofiyey. Marka dhan la kala dooranayo la sameeyey, guji dhoofinta iyo faylka loo hawl gelayaa.
Iyo in ay tahay! Waxaad hadda abuuray video fiican oo music iyo sawirada la editor Video Wondershare. Download version maxkamad free of qalab this video tafatirka hoos ku qoran.
Top 10 Free Music Video Rinjiga
Top 20 Music Video Goobaha durdurka Music
Sida loo Download Music Videos ka YouTube u Free
Sida loo rogo ama farriinta codka Files Audio in MP3
Sida loo sameeyo AVI Files yar
Sida loo Beddelaan MSWMM faylasha la MSWMM Converter
Video Rotator u Mac: Sida loo Laablaab Video ku Mac
Sida loo Beddelaan iyo Guba Wedding Videos in DVD
Sida loo Beddelaan Sony HandyCam Video inay DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
> Resource > Video > Sida loo sameeyo Video Picture la Music